Govecs GO! S3.4 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါကို GO! S3.4 ထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ GOVECS GO! S3.4 GOVECS ကနေပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ GO! S3.4 ထက်ပိုမို 80 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ S3.4 အနေနဲ့အဆင့်မြင့် brushless မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်မော်တာစွမ်းအားဖြင့်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခါးပတ် drive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျှပ်စစ် Scooter ကတော့ Scooter နီးပါးမျှဆူညံသံထုတ်လုပ်ကြောင်းသေချာသည့်ခေတ်မီ drive ကိုရထားရှိပါတယ်။
အဆိုပါအထူးဒီဇိုင်းသံမဏိပြွန်ဘောင်ဆွဲငင်အားတစ်ခုအလွန်နိမ့်စင်တာအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဘက်ထရီဗဟို positioned ကြောင်းသေချာ။ အဆိုပါအကျိုးရှိစွာ, brushless လျှပ်စစ်မော်တာနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ခါးပတ် drive ကိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် enable ။ သာ 120 ကီလိုဂရမ်၏အနိမ့်စုစုပေါင်းအလေးချိန်အလွန်ကောင်းသောတိမ်းလည်းအတွေ့အကြုံရှိဆိုင်ကယ်သမားမှအယူခံလိမ့်မည်ဟု sportive ကိုင်တွယ်စေတယ်။ 114 nm တစ် torque နှင့်တကွ, လျှပ်စစ် Scooter မဆိုမြန်နှုန်းကနေအထင်ကြီးစရာအရှိန်မြန်နှုန်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ lithium-polymer battery ကိုယာဉ်မောင်းစတိုင်ပေါ်မူတည်ပြီး 70 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးပေးပါသည်။ အားသွင်း Built-in charger ကိုနှင့်အတူမည်သည့်စံနှုန်းပါဝါထွက်ပေါက်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ နှစ်နာရီပြီးနောက်ဘက်ထရီက၎င်း၏စွမ်းရည်၏ 85% ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Govecs GO! S3.4 ရှေ့နှင့်နောက်ထဲမှာဟိုက်ဒရောလစ် disc ကိုဘရိတ်နှင့်အတူပေးအပ်သည်။
အဆိုပါ Govecs GO! S3.4 တစ်ဦးရှိပါတယ် Kinetic Energy က Recovery ကိုစနစ် (KERS) ။ braking သောအခါ, လျှပ်စစ်မော်တာတစ်ဦးမိုးကြိုးဓါတ်လုပ်စက်နှင့်အာဏာဘက်ထရီမှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒီအရုပ်ပျို system ကိုစွမ်းအင်ချွေတာနှင့်အကွာအဝေးတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါ GO နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ! S2.4 အဆိုပါ GO ပါ! S3.4 လည်းဘေးထွက်ရပ်တည်ချက်မြင့်မားသောရောင်ခြည်များနှင့်လိုင်စင်ပန်းကန်အလင်းရောင်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။